Iziseko zokuphefumla zokuCula
Ukuphefumla okuqhelekileyo kubandakanya ukuphefumla okungekho nzulu kunye nomphunga olandelwa yikhefu ngaphambi kokuba konke kuqale kwakhona. Kodwa xa ucula, ulawulo lokuphefumla luthetha ukuphefumla kwakho kwi-autopilot. Awudingi ukukhupha umoya ngokukhawuleza kwaye uphefumle kancinci njengoko ucula amabinzana engoma, kodwa kufuneka ugcine indlela efanelekileyo yokuma.
Ukuphefumla ngale ndlela kukubonelela ngolawulo lokuphefumla ekufuneka ucule ngokufanelekileyo. Nangona kunjalo, ngenxa yokuba ukuphefumla okulawulwayo akuveli ngokwendalo kuwe, kuya kufuneka uqeqeshe umzimba wakho ukuba uphefumlele ukucula. Qhubeka ufunda ukuze uhambe kwiziseko zokuphefumla.
Ukufumanisa umoya wakho wokucula
Eyona ndlela ilula yokufumanisa ukuba kufuneka uphefumle njani xa ucula kukuziva nje. Ukukwazi ukubona ngeso lengqondo kwaye uzive indlela efanelekileyo yokuphefumla kunceda ukwenza inkqubo yendalo ibe yeyakho, nayo.
Ukuphefumula ibhekisa kumoya ohamba emzimbeni wakho-ukuphefumla ngaphakathi. Umphunga kuxa ukhupha okanye uphephetha umoya. Uyakhupha xa uthetha okanye ucula.
Ukucula iingoma kufuna ukufumana umoya opheleleyo ngokukhawuleza - inhalation ekhawulezayo- kuba iokhestra ayinakulinda imizuzu emihlanu ukuze ufumane umoya. Ke ukwazi indlela oziva ngayo umzimba wakho xa uphefumla kukunceda ufumane umoya emzimbeni wakho ngokukhawuleza ukucula ibinzana elilandelayo. Sebenzisa lo msebenzi ulandelayo ukuze uphonononge inhalation yakho. Yiva indlela umzimba wakho ofanele uhambe ngayo xa uphefumla kwaye uphuma.
1. Yenza ngathi lo moya unzima ngokwenene xa uphefumlela phezulu. Yiba nomfanekiso-ngqondweni wobunzima beepawundi ezingama-50 kwaye mayiyeke iwele ezantsi emzimbeni wakho.
2. Mayiwele ezantsi kunesisu sakho. Jonga olu luvo.
3. Emva koko vumela umoya ungene ngokukhawuleza. Jonga ngoku ukuba inzima kodwa mayiyeke ngokukhawuleza emzimbeni wakho.
4. Ungayigcwalisa nemiphunga yakho ngokungathi uza kuqhuma ibhaluni. Uya kusiva isisu sakho kunye nomqolo ongezantsi uyanda.
i-nystatin swish kunye nokuginya idosi
Olu luvo lokuzalisa ngokukhawuleza imiphunga yakho ngumoya yindlela ophefumla ngayo ngokufanelekileyo xa ucula.
Ukuzamla kwenzeka ngalo lonke ixesha xa usebenza kulawulo lokuphefumla. Umzimba uyabhideka bubungakanani bomoya oza ngawo, kwaye uzamla. Abafundi belizwi bazamla ininzi ngexesha lezifundo kwaye baneentloni ekuqaleni. Ungakhathazeki - kulungile ukuzamla xa usebenza ekuphefumlweni kwakho.
Ukukhuphela ngaphandle ukucula
Ukucula kuthetha ukuba kufuneka ulawule umphefumlo wakho. Ufuna ukuba nomphunga oqhubekayo nogudileyo. Olu lawulo luyakunceda ukuba ucule ezo zinto zifuna amanqaku aphezulu kunye namabinzana amade acothayo.
Ukuphonononga umphunga, vuthela intsiba ejikeleze igumbi. Ukuba unendlu engenabala, kuya kufuneka usebenzise intsiba yokucinga.
1. Zama ukuvuthela intsiba phezulu kakhulu emoyeni kwaye usebenzise umsinga omde wokuphefumla ukuze unyuke.
2. Zama ukungawi kwisifuba xa uvuthela intsiba.
3. Ngelixa uleqa usiba ngomphefumlo wakho, qaphela ukuba yintoni ehamba emzimbeni wakho xa ukhupha. Kuya kufuneka uzive ukuba isisu sakho siye sabuyela kancinci kwinto yesiqhelo kwaye isifuba sakho sihleli kwindawo enye lonke ixesha.
4. Ekupheleni komphunga, kufuneka uzive ukuba kufuneka uphinde uphefumle kwakhona.
Ukuphefumla ngokufanelekileyo xa ucula yindibaniselwano yesimo esihle kunye nokuphefumla ngobuchule kunye nokuphefumla. Khumbula ukubaluleka kokuma kakuhle komzimba; ikuvumela ukuba ufumane ukuphefumla okunzulu, okupheleleyo. Ukuba ulala okanye uqinile kakhulu, uvalo lwakho luyatshixa kwaye lukuthintele ekufumaneni umoya ochanekileyo wokucula. Ukuba ukuphefumla kwakho kunye nokuma kwakho kusebenza kunye njengeqela, ungakuphucula ukucula kwakho.
Ukucula ngokusemandleni akho, ufuna ukukhula kakuhle xa uphefumla. Xa umzimba wakho ulungelelaniswe ngokuchanekileyo, ukuthatha kunye nokusebenzisa impefumlo efanelekileyo kulula.
Izandla zakho zozibini zinokukunceda uhlale umile kakuhle ngelixa uphefumla. Njengoko usebenza ngokwenza imithambo yokuphefumla, beka isandla sakho esifubeni sakho kunye nesinye isandla kwi-abs yakho. Njengoko uphefumlela phezulu, sebenzisa isandla sakho ukuziva ukuba isifuba sakho sihlala sizinzile na; ufuna ukuba ihlale kwindawo enye inhalation kunye nomphunga. (Ukuba isifuba sakho sinyuka ngexesha lokuphefumula, wenza uxinzelelo esifubeni nasentanyeni.) Ngesinye isandla sakho, yiva ukuphuma kunye ne-abs yakho njengoko uphefumla kwaye ubuyela emzimbeni wakho njengoko uphuma.
Ukubeka umzimba wakho emphefumlweni
Izikhundla zomzimba ezahlukileyo zikunceda ukuba uve ukuhamba komoya wakho. Ukuhamba ngezikhundla ezahlukeneyo kunokukunceda ukuba uve ukuhamba komoya.
Qala ucabalele phantsi kwaye ngokuthe ngcembe usebenze ngendlela yakho yokuma. Kukulungele ukusebenza umoya wakho phantsi, kodwa awukwazi ukwenza phantsi. Kuya kufuneka uvuke ngelinye ixesha kwaye uphefumle ngokuchanekileyo, ngenxa yoko kunokuba kanye kwangoko. Ngokuqala phantsi, uyakwazi ukugxila ekuphefumlweni nasekuhambeni emzimbeni wakho. Ngokusebenza ngokuthe chu ukunyuka, ungaqhubeka nokuphonononga intshukumo efanayo yokuphefumla ngelixa usenza indlela yakho yokuma. Ezinye iimvumi zinengxaki yokufumana intshukumo efanelekileyo yokuphefumla xa zime. Xa beqala phantsi, bahlala befumana imo yokukhululwa emzimbeni wabo kwaye bayayiva intshukumo.
1. Lala phantsi okanye ebhedini unencwadi enzima esiswini sakho.
2. Njengokuba uphefumlela phezulu, kuya kufuneka uyibone incwadi inyuka ze yehlise umva njengoko uphefumla ngaphandle. Ukuba awuyiboni incwadi ishukuma, qaphela ukuba yintoni ehambayo njengoko uphefumla. Yiva imvakalelo emzimbeni wakho. Xa uphefumlela phezulu, imiphunga yakho iyanda kwaye ithathe umoya. Umzimba wakho, ngokukodwa isisu sakho, uphuma njengoko uphefumla.
3. Njengoko uphuma, umoya uyawushiya umzimba wakho, kwaye kuya kufuneka ubone okanye uve i-abs ibuyela umva. Le ntshukumo yenzeka ngenxa yomoya ohambayo hayi kuba ususa i-abs yakho. Ungayibuyisa i-abs yakho ngaphandle kokuphefumla, kodwa ayizukuphucula ukucula kwakho.
Ukufika phantsi ezandleni zakho nasemadolweni
1. Guqa ngedolo phantsi. Ewe udinga iimpahla ezintle ukuze usinde kule mithambo. Kule ndawo inesidima, thatha umoya ophefumlayo kwaye uqaphele ukuba uziva uhamba emzimbeni wakho.
2. Ngexesha lokuphefumla, i-abs yakho iwela phantsi.
3. Ngexesha lomphunga, i-abs yakho ibuyela umva kunye nomoya ophumayo. Ukuba uziva ushukuma ngokuchaseneyo, zama kwakhona.
4. Isifuba sakho kufuneka sihlale sizinzile kwaye singawi.
5. Qaphela ukuba umqolo wakho uthi chatha njani ngokuphefumla.
Xa uphumelele kwaye uve ukunyakaza okuchanekileyo komzimba wakho kunye nokuphefumla, zama umthambo olandelayo.
Ukuqhekeza kuyinto emnandi njengokufika ezandleni nasezidolweni, kwaye kufuna iimpahla ezimnandi, nazo.
1. squat phantsi emgangathweni.
Ungazigcina izithende zakho phantsi okanye uziphakamise emgangathweni. Unako ukubeka izandla zakho phantsi ukuze uzinze ibhalansi yakho. Musa ukuwa!
2. Njengokuba uphefumlela phezulu, qaphela intshukumo ngasemva kwakho.
Into ofuna ukuyiva kukungabikho kwakho ukuphuma kunye nomqolo wakho osezantsi uyanda njengoko uphefumla. Ukuba awuqinisekanga ngale ntshukumo yokuphefumla, tshintsha indawo yakho kancinci. Akunyanzelekanga ukuba ubesesikwereni ngokuchanekileyo.
Ukutyibilika akukho semthethweni phakathi kweemvumi, kodwa ungaxeleli mntu.
1. Yima up and slump over.
2. Njengoko ulele, yiva intshukumo emzimbeni wakho xa uphefumla.
isetyenziselwa ntoni i-xanax
3. Khulula intamo yakho ukuze umqolo wakho uhlale upholile xa uphefumla.
4. Qaphela ukuba xa uthatha umoya, ungaziva ngathi i-abs esezantsi iyaphuma, kuba zonke zi-flabby ekubeni zityhutyhe ngaphezulu. Abo babhityile ngokwenene, usenokungaziva ngathi awukho xa ushukuma kakhulu ekuqaleni. Kulungile. Usenokufumana imikhwa yokuphefumla ngokucula.
5. Qaphela kwakhona ukuba umqolo wakho osezantsi uyavuleka njengokuba uphefumlela phezulu. Zama ukuvumela iimbambo zakho zivale kancinci xa ukhupha endaweni yokuwa kwangoko.
Ezi ndawo zinomtsalane, zomzimba zikunceda ukuba uve umoya ohamba emzimbeni wakho. Zama ukuma ubude kwaye uqaphele okwenziwa ngumzimba wakho xa uphefumla.
Kulungile ukuba udidekile ngokwenene ngoku okanye uzive uphelelwa ngumoya. Ukuziva uphefumla kancinci xa uqala ukusebenza ngale mithambo kuyinto eqhelekileyo. Yiba nomonde ngokwenene, kwaye uya kuqala ukuphefumla ngokufanelekileyo. Kuthatha ixesha ukwenza umkhwa omtsha emzimbeni wakho, kwaye ukuphefumlela ukucula ngokuqinisekileyo kuyinto entsha. Ukuphefumula kwakho kwakufanelekile xa wawulusana. Ukuba ubukele usana luphefumla, bayayazi kakuhle into amabayenze. Njengoko uneminyaka yobudala kwaye ubomi bakho buba nzima ngakumbi, uxinzelelo luchaphazela umzimba wakho. Uqala ukuthwala uxinzelelo olungeyomfuneko kwiindawo ezahlukeneyo zomzimba wakho, ezinokukunqanda ukuba ungaphefumli ngokuchanekileyo. Umzimba wakho uyaxinezeleka.
https //www.google.com Guqula
zingaphi iingcebiso endinokuzithatha
umvelisi wenombolo engahleliwe c
iziphumo ebezingalindelekanga zequetiapine
ide kangakanani i-cbd ibonakale kumchamo